Global Voices teny Malagasy » Ireo torohevitra tsara indrindra amin’ny fanoratana · Global Voices teny Malagasy » Print
Ireo torohevitra tsara indrindra amin'ny fanoratana
Voadika ny 09 Jona 2019 4:27 GMT 1	 · Mpanoratra Mary Aviles Nandika avylavitra
Writer (Mpanoratra). Sary avy amin'ny kaonty Flickr fitahirzan-tsarin'i Dave Morrison, nampiasàna lisansa Creative Commons.
Ireo Torohevitra Isankerinadro momba ny fanoratana dia fantina iray amin'ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanoratana sy fanaovana tatitra ato amin'ny Global Voices. Ny torohevitra nandritra ny volana Desambra dia i Mary , toniandahatsoratra ho an'ny faritra Amerika Latina no nitondra azy ho anareo.
“Raha misy ny majika amin'ny fanoratana tantara, ary resy lahatra aho fa misy ilay izy, tsy nisy na iza na iza afaka ny nampidina / nanetry izany ho toy ny fomba fikarakaraka sakafo afaka ny ho ampitampitaina aman'olona .” –John Steinbeck
Tongasoa eto amin'ny andiany faharoa amin'ny torohevitra isankerinadro momba ny fanoratana.
Didifolon'ny fanoratana avy amin'i Elmore Leonard
“raha toa ka toy ny fanoratana no ahatsapana azy….avereno soratana indray.”
Torohevitra enina momba ny fanoratana avy amin'i John Steinbeck
“Soraty tsy misy teritery sy amin'ny fomba faran'izay haingana indrindra dia atsipazo ho anaty taratasy ny zavatra rehetra. Aza asiana fanitsiana ary aza averina soratana mandrapahatapitry ny zavatra rehetra. Ny famerenana manoratra indray mandeha ampanarahana zotra dia matetika hita ho toy ny fialàna bala tsy hanohizana azy. Mifaningotra ihany koa io amin'ny fikorianana sy ny firindràna izay tsy azo raha tsy avy aminà karazana fitambarana tsy niomanan'ny saina amin'ilay akora.”
Didifolon'ny fanoratana avy amin'i Zadie Smith
“Mamelà elanelam-potoana sahaza eo anelanelan'ny nanoratana zavatra iray sy ny hikiràna / hanovàna azy”.
“Amin'ny maha-mpanoratra, tsy tokony hitsara ianao. Tokony hahatakatra.”
Isabel Allende: Mitondra filaminana ao anaty safotofotom-piainana ny asa fanoratana
“Misehoa, misehoa, misehoa, ary fotoana fohy aorian'izay, hiseho ihany koa ny “muse” (ilay andriamanibavin'ny haisoratra sy haikanto).”
Torohevitra tsy resin'ny fotoana avy amin'i Walter Benjamin momba ny fanoratana
“Dingan'ny famoronana: hevitra — fiangaly — fanoratana. Ny lanjan'ny fanoratana bikàna dia ny hoe eo am-pamokarana azy ianao no maneho fiangaliana soratra atao amin'izay lafatra indrindra. Mamono iìaingam-panahy ny hevitra, mibahana azy ny fiangaly, fa ny soratra no manome ny vokatry ny fiangaliana”.
Ny an'i Susan Sontag
“Ny mpanoratra iray, toy ny atleta iray, dia tsy maintsy “manao fanazarantena” isanandro. Inona no nataoko androany mba hijanonana ho ‘tomady’ ?
“Aza matahotra ny hivantambantana!”
“Tsy afaka ny hanoratra tsara ianao raha tsy manana angondrakitra.”
Margaret Atwood: Didifolon'ny fanoratana
“Ampanaovy fanatanjahantena ny lamosinao. Mamilivily saina mantsy ny fanaintainana.”
Didy iraikambinifolon'ny fanoratana avy amin'i Henry Miller sy Fahazarana miteraka famoronana mandeha ho azy isanandro
“Zavatra iray loha hatrany tolomina ho vitaina hatramin'ny farany”.
“Izay tena teny mifanandrify no ampiasao, fa tsy ilay mifanakaikikaiky aminy”.
“Mino aho fa rakotra ohabolana ny làlana mankany amin'ny helo, ary hodradradradraiko eny an-tafontrano izany”.
“Teny fohy, fehezanteny fohy ary andalanteny fohy no ampiasao”.
Ireo torohevitra ireo dia notsimponina avy ao anatin'ny “Hemingway on Writing, Elmore Leonard’s 10 rules of writing, Walter Benjamin’s thirteen doctrines, Zadie Smith’s 10 rules of writing, David Ogilvy’s 10 no-bullshit tips, Henry Miller’s 11 commandments, John Steinbeck’s 6 pointers, sy ny Susan Sontag’s synthesized learnings”.
Tranonkala iray isan'izay ankafiziko no azonareo idirana hahazoana azy rehetra ireo: ny Brain Pickings .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/09/140071/